Tsy nitsitsy ny fitsarana tao Toamasina…: voasazy 10 taona, asa an-terivozona, ireo namono ilay mpandraharaha | NewsMada
Miraradraraka ny fanamelohana avy amin’ny fitsarana nandritra ny fotoam-pitsarana ady heloka bevava ao Toamasina. Roa lahy nomelohin’ny fitsarana hiasa an-terivozona 10 taona an-tranomaizana noho ny raharaha famonoana mpandraharaha iray…
Voaheloka hanao asa an-terivozona 10 taona an-tranomaizina ireo roa lahy (i Mahadiso, 29 tao­na, sy i Tovognatsoa, 23 taona, samy avy any Ambo­vombe) nandritra ny fotoam-pitsarana ady heloka bevava tao amin’ny lapan’ny Fitsara­na Toamasina, omaly, momba ny raharaha famonoana an’i Manana Jean Richellin.
Afaka noho ny fisalasalana kosa i Heriniaina De­rolliad. Misehatra momba ny fandraharahana lavanila, jiroro, kanelina, dipoavatra eny hatramin’ny grafita i Manana Jean Richellin izay novo­noin’ireto jiolahy ireto tamin’ny fomba feno habibiana, ny alin’ny 21 jona 2020 tao Toamasina. Raha hiverenana ity raharaha ity, hita faty efa rotiky ny daroka sy ny vono sy dian’antsy ary nodorana asidra ilay mpandraharaha tamin’io fotoana io. Nibori­dana tsy nisy akanjo intsony ny vatany tamin’ny fotoana nahitana ny razana tao ana­tin’ny kirihitr’alan’i Barika­dimy Toamasina, mifanila amin’ny oniversite. Ny maraina vao nisy nahita ny vatany efa nihosin-dra tsy nisy namantarana azy intsony sady main’ny asidra.
Nilaza ho tsy namono nahafaty ilay mpandraharaha ireo jiolahy…
Raha ny angom-baovao, araka ny famakiana ny antontan-taratasin’ny zanany, i Ma­nana Energelle Joyce Minah, tamin’ny fitoriana nataon’izy ireo, tsy nitondra fiara izy tamin’io fotoana io fa hivoaka kely hiaraka amin’ny namany tsy lavitra eo hiara-kisotrosotro. Ny fatiny anefa no hitan’ny fianakaviany ny maraina. Hatramin’ny fiandohan’ny raharaha, efa mitazona ny voampanga telo lahy hatrany ny fianakaviany. Nilaza ireo voampanga nandritra ny fo­toam-pitsarana azy ireo fa niditra an-keriny tao an-tranon’ireo jiolahy ka nikasa hangalatra tao amin’izy ireo. “Nodarohinay izy ka nofatoranay ary nataonay teo ambony kalesa ka navoakany nivoaka ny arabe”, hoy ny fanazavan’ireo voampanga. Nambaran’izy ireo fa tsy ry zalahy intsony ny namono nahafaty. Naharitra adiny roa mahery ny fifandaharana momba ity raharaha ity manoloana ny fitsarana. Nilatsaka ny didim-pitsarana ka izao niafara amin’ny asa an-terivozona 10 an-tranomaizina ho an’i Mahadiso sy i Tovogna­tsoa.